Cabbiraad waa ku saabsan samaynta go'aano ka soo jawaabay aad ku tidhaahdaan waxa jawaabaha aad u malaynayso oo samayn.
Category labaad ee guud ahaan qaabka baadi sahanka waa cabbirka; waxaa shaqo ku leh sida aan go'aano ka dhigi karaa jawaabaha in jawaabaha siiyo su'aalaha our. Waxaa soo baxday in jawaabaha aan ka helno, oo sidaas daraaddeed go'aano aan u sameeyaan, waxay ku xirnaan kartaa siyaabo-ku adag-iyo in mararka qaar la yaab leh sida aynu weyddiisanno. Waxaa laga yaabaa in aan waxba muujinayaa dhibic muhiim this ka fiican tahay kaftan kitaabkii cajiib Waydiinta Su'aalaha by Norman Bradburn, Seymour Sudman, iyo Brian Wansink (2004) :
Waxaa jira tusaalooyin badan oo cillado sida mid ka mid ah soo maray by labada wadaaddada. Dhab ahaantii, arrinta aad ee asalka u ah kaftan this leeyahay magac ee bulshada cilmi sahanka: saamaynta foomka su'aal (Kalton and Schuman 1982) . Si aad u aragto sida ay saamayn foomka su'aal saamayn laga yaabaa sahan dhabta ah, ka fiirso labadan su'aalo sahan raadinaya aad u la mid ah:
Inkastoo labada su'aalood ee ah inay ku qiyaasto wax la mid ah, ay soo saaray natiijooyin kala duwan ee tijaabo baadhitaan dhab ah (Schuman and Presser 1996) . Marka hal hab weydiiyey, oo ku saabsan 60% dadkii ka soo jawaabay ayaa sheegay in shaqsiyaadka ahaayeen kuwo ka badan ay sabab u dambi, laakiin markii la weydiiyay hab kale oo ku saabsan 60% ayaa sheegay in xaaladaha bulsho ahaayeen kuwo ka badan eeda (Jaantuska 3.2). In si kale loo dhigo, farqiga yar ee u dhexeeya labada su'aalood ee keeni kara cilmi soo gabogabayn ah oo kala duwan.
Jaantuska 3.2: Natiijooyinka ka soo tijaabo baadhitaan (Schuman and Presser 1996, Table 8.1) . Cilmi heli kartaa jawaabaha kala duwan taas oo ku xidhan sida saxda ah sida ay u weydiiyay su'aasha ah. Tani waa tusaale ka mid ah foomka su'aal saamayn (Kalton and Schuman 1982) .
Waxa intaa dheer in qaab-dhismeedka su'aasha, jawaab bixiyayaasha ayaa sidoo kale ku siin kara jawaabo kala duwan oo ku salaysan erayada gaar ah loo isticmaalo. Tusaale ahaan, si loo cabbiro fikradaha ku saabsan mudnaanta dawladeed, jawaabaha waxaa lagu akhriyey isla markiiba soo socda:
". Gargaarka dadka saboolka ah" Next, kala badh jawaab ah ayaa la waydiiyay "welfare" iyo badh ayaa la waydiiyay Iyada oo laga yaabo in u muuqdaan sida laba weedho kala duwan ee wax la mid ah, ay xogogaalnimo natiijooyin aad u kala duwan (Jaantuska 3.3); Americans warbixin uga sii taageero ah "gargaarka inay masaakiinta" badan "welfare" (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) . Inkasta oo cilmi baadhitaan ka fiirsan saameynta haya- si ahaan cillado, waxay sidoo kale iyaga ka fiirsan karaan natiijooyinka cilmi-baarista. Taasi waa, waxaan bartay wax ku saabsan ra'yiga dadweynaha ka natiijadan.
Jaantuska 3.3: Natiijooyinka ka Huber and Paris (2013) . Jawaab badan u badan yihiin taageero ah "gargaarka inay masaakiinta" badan "welfare." Tani waa tusaale ka mid ah saamayn su'aal haya- a dheehan jawaabaha in cilmi helaan ay ku xiran tahay sida saxda ah oo erayada ay u isticmaalaan in ay su'aalo.
Sida kuwan tusaalooyin ku saabsan saamaynta foomka su'aal iyo saamaynta haya- muujiyaan, jawaabaha in cilmi hesho waxa saamayn karaa siyaabo khiyaano ku salaysan sida ay u weydiiyaan su'aalo ay. Tani macnaheedu ma aha in sahan waa in aan la isticmaali, inta badan waxaa jira Doorasho ma. Saas ma aha, tusaale muujinaya in aan si taxadar leh loo dhiso su'aalo iyo in aynaan aqbali jawaabaha mufasiriinta.
Inta badan cad, taas macnaheedu waa in haddii aad shaandheynta xogta sahanka laga soo ururiyey by qof kale, hubi in aad akhrido su'aalaha dhabta ah. Oo, haddii aad la abuuro aad su'aalaha u gaar ah, anna waxaan leeyahay saddex talooyin. First, Waxaan u soo jeedin waxaad ka akhrisan badan oo ku saabsan su'aalaha design (tusaale ahaan, Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); waxaa jira in ka badan in ay ka badan aan awoodin in ay halkan ku tilmaami. Second, Waxaan u soo jeedin in aad nuqul ka-erayga erayga-su'aalaha ka sahan oo tayo sare leh. Inkasta oo ay tani u muuqataa sidii Qishka, su'aalo koobiyeynta waxaa lagu dhiirigelinayaa in cilmi baadhitaan (inta aad tixraacaan sahanka asalka ah). Haddii aad nuqul su'aalo ka sahan oo tayo sare leh, waxaad yaqiinsanaysaa in ay la tijaabiyey oo aad is barbardhigi kartaa jawaabaha aad sahan in jawaabaha qaar ka mid sahan kale. Ugu dambeyntii, waxaan soo jeedinaynaa inaad pre-tijaabin su'aalahaaga oo dadka oo qaar ka mid ah dadka ku yiilleen aad (Presser et al. 2004) ; aan waayo-aragnimo waa in pre-imtixaanka mar walba shaaca ka qaaday arrimaha la yaab leh.